Barnaamijka saacadda qaylo-dhaanta ugu fiican ayaa suuragal ah inuu yeesho Alarm | Androidsis
Tan iyo markii aan helnay inagu soo food leh Waqti iyo hagaajinta barnaamijka digniinta caadiga ah ee ku saabsan Android, waxay umuuqataa in wax walba lagu sheegay qeybtaan barnaamijyada. Mid ka mid noqoshada dalab naqshad weyn leh iyo isdhexgalka noo ogolaanaya inaan si deg deg ah u hagaajinno alaarmiga, iyo tan kale sababtoo ah waxay ugu muuqataa mid iska caadi ah Android, iyadoo la siinayo wax walba oo aan ka filan karno barnaamij noocan ah.
Laakiin waa inaan ogaano in sanado badan ay jireen barnaamijyo qaylodhaan aad u wanaagsan oo ku saabsan Android. Maanta waxaan dib u soo ceshanay mid inala socday muddo dheer iyo intaas suurto gal ah barnaamijka saacadda alaarmiga ugu fiican ee loogu talagalay Android, ogolaanshaha labada kor ku xusan. Alarm Gentle wuxuu bixiyaa habeyn dheeri ah, wuxuu leeyahay astaamo badan wuxuuna leeyahay qaylodhaanno aad u xoog badan oo aad hubaal ku seegi doontid maanta laga bilaabo barnaamijka saacadda alaarmiga ee aad ugu jeceshahay markaad isku daydo.
1 Barnaamij saacad qaylodhaan xoog leh
2 Alaarmiga saacadaha oo dhan
Barnaamij saacad qaylodhaan xoog leh
Dhamaan astaamayntaas iyo astaamahaasi waxay noo horseedaan barnaamij qaylo-dhaan badan oo noocyo badan leh, kaas oo loo adeegsan karo wax ka beddelka qiimayaashiisa si marka aan u aadno joojinta alaarmiga ay tahay inuu na toosiyo waqti cayiman, dhalaalka shaashaddu waa boqolkiiba 30 si aynaan u wareerin ilayskaas tirada ah saacad cibaadolaawe ah.
Waxyaabaha kale ee ay soo bandhigto ee ugu xiisaha badan ayaa ah habeynta markay na toosiso si aan ugu ciyaarno durdurkii idaacadda ee ugu jeclaa badh mugga, iyo inay si tartiib tartiib ah u kordhineyso mugga si baraarugeennu u habboon yahay. Xitaa haddii muusiggaas la ciyaarayaa uu u muuqdo mid aan ku habboonayn sabab kasta ha noqotee, waxaan ku wareejin karnaa taleefanka casriga ah si aan u yeelno alaarmiga illaa labaatan daqiiqo. Waxaan dooneynaa inaan helno xoogaa hurdo ah oo Qaylodhaanta Jilicsan ayaa leh dhammaan astaamaha lagu sameeyo tan.
Faahfaahin yar oo dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijkan ayaa ah awoodeeda inay ku soo bandhigto saacad joogto ah shaashadda iyadoo taleefanka lagu soo shubayo shaqada.
Alaarmiga saacadaha oo dhan
Waxaa laga yaabaa meesha haddii aan wax u nisbeyn karno Alarm Gentle ay tahay taas oo aan lahayn Naqshad Dhismeedkaas in aan ku aragno barnaamij kasta oo qiimihiisu cusb yahay maanta. Mana aha wax ku jira barnaamij noocan oo kale ah mid muhiim ah si uu u sii wado la noolaanshaha barnaamijyada kale ee aan ku hayno xusuusta gudaha, laakiin waa faahfaahin la qiimeyn karo. Waxaan sidoo kale uga faallooday Timely dareenkan halka uu ku ogyahay sida loo siiyo furaha saxda ah inuu nooga tago si yaab leh, sida uu uga tagay ragga Google oo ugu dambeyntii go'aansaday inay la wareegaan kooxda horumarinta ee ka dambeysa barnaamijka.
Alarm Gentle waa a qaylodhaan aad u fiican si loo abuuro jawiga ugu fiican ee alaarmiga saxda ah. Ha raadin ama ha rakibin haddii aad rabto barnaamij si aad u abuurto alaarmiga si aad u yara seexato, tan awgeed waxaan horey u haysannay midka Android. Qaylodhaanta 'Gentle Alarm' ayaa loogu talagalay waxyaabo kale waxayna hubaal ahaan ku habboon tahay baahiyaha qaar ka mid ah isticmaaleyaasha leh wiish yar oo gaar ah ama doonaya in xilligaas uu noqdo kan ugu fiican ku bilow si ka wanaagsan maalinta.
Waxaan leenahay mucaarad dhab ah si loo adkeeyo barnaamijkan, laakiin waxaan dhihi karnaa 'Gentle Alarm' waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran. Akhlaaqdaasi gabi ahaanba bilaash kuma timaado, maadaama aad isticmaali karto barnaamijka bilaashka ah ee qaylo-dhaanku aanu shaqeyn doonin Arbacada oo ay leedahay xayeysiis, wixii ka dambeeya waa inaad ku rakibtaa midka la bixiyay € 2,41.
Hadda aan rajeyno uun dhawaan waxay nagala yaabi doonaan isdhexgal lagu hagaajiyay Naqshadeynta Maaddada. Aad loogu taliyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Alarm Gentle, awoodda ka dambeysa barnaamijkan saacadda alaarmiga
Kuwii Google waxay iibsadeen Timely si ay uga baxaan meel gees ah, barnaamijka saacadda Android lafteeda waa muuqaal laga yaqyaqsiiyo, maxaa diidaya in lagu daro Waqtiga leh qurux aan caadi ahayn? si xun ayaa loo qabtay, Google, si xun ayaa loo qabtay ...
Ku jawaab si aad u daadiso
Waxay ila tahay wax layaab leh aniga inaad kahadasho arji aan dhamaantiis cusbooneysiin oo duugoobay isla markaana aadan dhag jalaq u siinin codsiyadayda si aad ugu yaraan ugu magacawdo Turbo Alarm qoraal. Wax soo saarka guriga iyo taasi qashin ma leh.